bakaba | Myanmar Mp3 Album
Home / bakaba
Author Archives: bakaba
အောင်ခန့် – တစ်ယောက်တည်းတွေးခြင်း (၂၀၁၁)
အောင်ခန့် – တစ်ယောက်တည်းတွေးခြင်း (၂၀၁၁) ၀၁ မှိုတက်အတွေးအခေါ်များ ၀၂ တစ်ယောက်တည်းတွေးခြင်း ၀၃ ဆက်မချစ်နဲ့ ၀၄ ဝေးခဲ့ပြီးနောက် ၀၅ ဇဝေဇ၀ါညများ ၀၆ ဝေးတဲ့ခဏ ၀၇ ဘ၀ရုပ်ရှင် ၀၈ မင်းရဲ့အဝေး ၀၉ မျှော်လင့်နေဆဲ ၁၀ မီးလျှံငှက်ဒဏ္ဍာရီ http://www.mediafire.com/?z3899bgkg1c89gj Credit to axle/swordfish
December 3, 2011 bakaba New Myanmar Albums အောင်ခန့် 10 Comments
သူရိန် – သက္ကရာဇ်တွေတိုင်း (၂၀၁၁)
သူရိန် – သက္ကရာဇ်တွေတိုင်း (၂၀၁၁) ၀၁ လေထဲသို့ ၀၂ မင်းလေးပဲ ၀၃ အချစ်အိမ်ကလေး ၀၄ သာဓကများ ၀၅ Robot စက်ရုပ် ၀၆ သက္ကရာဇ်တွေတိုင်း ၀၇ အမေ့ကိုလွမ်းတယ် ၀၈ အတူနေကြမယ် ၀၉ ကံဆိုးခြင်း ၁၀ ခွင့်လွှတ်ပါကွယ် ၁၁ အမြဲတမ်းရှိနေမယ် ၁၂ လူသားခြင်းဖေးကူစောင့်ရှောက်မယ် http://www.mediafire.com/?lv3dplcuolqdobo Special thanks to Axlerose/ Swordfish
November 26, 2011 bakaba Myanmar Artist New Myanmar Albums သူရိန်3Comments
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – ငါ့စိတ်ထဲကနွေဦး ၂၀၁၁
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် – ငါ့စိတ်ထဲကနွေဦး ၂၀၁၁ ၀၁ မှားနေလာ ၀၂ နှလုံးသားဒိုင်ယာရီ ၀၃ ချယ်ရီချိန် ၀၄ နွေဦး ၀၅ မင်းအကြောင်းစိတ်ကူး ၀၆ ဘ၀တစ်ခု ၀၇ အိမ်ပြန်ချိန် ၀၈ ငါ့စိတ် ၀၉ စေညွှန်ရာ ၁၀ အချစ် ၁၁ ကဗျာဆန်သောမိုး http://www.mediafire.com/?ia3zisjysvlr550 Special thanks to axle rose/ swordfish
November 26, 2011 bakaba Myanmar Artist New Myanmar Albums ပြည့်ပိုင်မှုးအိမ် 1 Comment
Daughtry – Break The Spell [Deluxe Edition] (2011) Style: Rock Release: Nov 21, 2011 01. Renegade 02. Crawling Back to You 03. Outta My Head 04. Start of Something Good 05. Crazy 06. Break the Spell 07. We’re Not Gonna Fall 08. Gone Too Soon 09. Losing My Mind 10. Rescue Me 11. Louder Than … Continue Reading →
November 18, 2011 bakaba Daughtry Leaveacomment
Gorillaz – The Singles Collection 2001-2011 (2011) Style: Alter Hip-hip Release: Nov 28, 2011 01. Tomorrow Comes Today 02. Clint Eastwood 03. 19-2000 04. Rock The House 05. Feel Good Inc 06. DARE 07. Dirty Harry 08. Kids With Guns 09. El Manana 10. Stylo 11. Superfast Jellyfish 12. On Melancholy Hill 13. Doncamatic 14. … Continue Reading →
November 2, 2011 bakaba New International Albums Gorillaz Leaveacomment
စောဖိုးခွား – ဖြည်းဖြည်းယောက်ဖ (Reggae) သီချင်းများ
စောဖိုးခွား – ဖြည်းဖြည်းယောက်ဖ (Reggae) သီချင်းများ ၀၁ ရက်ဂေးရူး ၀၂ ၁၉လမ်း ၀၃ အမုန်းမလိုပါ ၀၄ အနွမ်းပန်းလေး ၀၅ ဂီတထဲကငါ့ဘ၀ ၀၆ ထားခဲ့ဟေ့ …. ၀၇ သေပြီ ၀၈ တိုင်ပတ်နေပြီ ၀၉ သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် ၁၀ ဖြည်းဖြည်းယောက်ဖ ၁၁ ချစ်ကြပါ (Bonus Track ..with EULOGIA Group) http://www.mediafire.com/?fqkuxeb0yetq8bo or http://ifile.it/0gqesat or http://www.megaupload.com/?d=GC6CY5OK On behalf of ‘swordfish’ (all credits go to him)
October 29, 2011 bakaba New Myanmar Albums စောဖိုးခွား 1 Comment
ဂျော်နီ – အနိုင်နဲ့ပိုင်းခြင်း
ဂျော်နီ – အနိုင်နဲ့ပိုင်းခြင်း ၀၁ ချာတိတ် – ဂျော်နီ+ဇီတာဆိုင်း ၀၂ အိပ်မက်စီးပြီးလာမယ် – အုပ်စိုး ၀၃ အမုန်းနဲ့အပြိုင် – ဂျော်နီ ၀၄ မျက်နှာဖုန်း – ဂျော်နီ ၊ ချစ်ကောင်း ၀၅ မမရတနာ – ဂျော်နီ ၊ ဟဲလေး ၀၆ အခုခဏလေးတောင်မဝေးဘူး (I Don’t Wanna Live Without You) – ဂျော်နီ ၀၇ အချစ်ကတစ်ခြားတစ်ယောက်ဆီမှာလား – ဂျော်နီ+Lဆိုင်းဇီ ၀၈ မင်းမရှိလို့မဖြစ် – ဂျော်နီ+ထက်ထက်စုလှိုင် ၀၉ အနိုင်နဲ့ပိုင်းခြင်း – ဂျော်နီ ၁၀ ငယ်နာမည်လေးခပ်မေ့မေ့ – ဂျော်နီ ၊ စောအဂ္ဂ … Continue Reading →
October 29, 2011 bakaba New Myanmar Albums ဂျော်နီ 1 Comment
VA – Now Christmas 2011 (2011)
VA – Now Christmas 2011 (2011) CD1 01: John Lennon & Yoko Ono – Happy X-Mas (War Is Over) 02: Band Aid II – Do They Know It’s Christmas 03: Søs Fenger – Ludvig Og Julemanden 04: Coldplay – Christmas Lights 05: Anden – Jul På Vesterbro 06: Robbie Williams – Walk This Sleigh 07: … Continue Reading →
October 28, 2011 bakaba New International Albums Leaveacomment
Justin Bieber – Under the Mistletoe (2011) Style: Pop, Christmas Release: Nov 1, 2011 01. Only Thing I Ever Get For Christmas 02. Mistletoe 03. Justin Bieber Feat. Usher – The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire) 04. Santa Claus Is Coming To Town 05. Justin Bieber Feat. Boyz II Men – Fa … Continue Reading →
October 28, 2011 bakaba Justin Bieber2Comments
Boyz II Men – Twenty (2011)
Boyz II Men – Twenty (2011) itune Deluxe version CD1 ကသီချင်းသစ်တွေဖြစ်ပြီး CD2 ကတော့ အကောင်းဆုံးသီချင်းတွေကို ပြန်ဆိုထားတာပါ။ Style: R&B, Pop Release: Oct 25, 2011 CD1: 01. Believe 02. So Amazing 03. Put Some Music On 04. Slowly 05. More Than You’ll Ever Know 06. I Shoulda Lied 07. Benefit ofaFool 08. Refuse to Be the … Continue Reading →
October 19, 2011 bakaba New International Albums Boyz II Men Leaveacomment